Xarumihii Waxbarashada & Cafimaadka Xeradda Qaxooti Somaalida dalka Yeman oo Xiran (dhegayso) – Radio Daljir
Xarumihii Waxbarashada & Cafimaadka Xeradda Qaxooti Somaalida dalka Yeman oo Xiran (dhegayso)
Maarso 14, 2018 6:21 g 0
Waxaa maanta Guud ahaan la xirray Adeegyadi Asaasiga u ahaa Nolasha Somaalida kunool Xeradda qaxootiga alkharaz ee dalka yeman ,Waxaana xiran Xarumaha Waxbarashada,Cisbitaalada iyo goobaha kale ee dadka somaliyeed ka helaan adegyada caadiga ah.
Xirnaanasha Xarumaha ayaa loo sababaynaya kadib markii macalimiinta iyo dhaakhtirta Xarumahas aysan helin Wax mushaar ah bilihii lasoo dhafay,iyado taas sababtay in xaalad adag soo Wajahdo somaalida kujirta xeradaas.
Dhinaca kale Hay’adihi gargaarka kabixin jiray Xeradaas oo ay kamid tahay Hay’adda UNHCR ayaa muddo toban malmood ah ka howlgalin Xeradaas ,xili amaro lagu siyaay in aysan imaan karrin xeradas.
Wariye Maxamuud Koronto oo kamid ah Wariyaasha ku sugan Xeradas oo Radio Daljir la hadlay ayaa ka hadlay xirnaansha xarumaha muhiimka u ah dadka somaliyeed ee ku sugan halkas ,iyado Carur farabadan ay ka baqdeen Waxbarashadoodi.
Guddoomiye Jawaari oo ka hadlay Mooshinka laga gudbiyaay (dhegayso)